द बुक अफ गुड लभ: मध्ययुगीन स्पेनिश साहित्यको क्लासिक | समाचार साहित्य
राम्रो प्रेमको पुस्तक
जुआन अर्टिज | 02/12/2021 18:37 | अद्यावधिक गरियो 02/12/2021 18:47 | जीवनी, साहित्यको इतिहास, किताबहरु
राम्रो प्रेमको पुस्तक (1330 र 1343) जुआन रुइज द्वारा बनाईएको एक विविध हो, जसले XNUMX औं शताब्दी को समयमा Hita को Archpriest को रूप मा सेवा गरे। यो काम - को रूपमा पनि चिनिन्छ Archpriest पुस्तक o गीतको पुस्तक- यो मध्ययुगीन स्पेनिश साहित्य को एक क्लासिक मानिन्छ. यसको रचना व्यापक छ, जसमा 1.700 भन्दा बढी श्लोकहरू छन् जसमा लेखकको काल्पनिक आत्मकथा वर्णन गरिएको छ।
यस पुस्तकका तीनवटा पाण्डुलिपिहरू छन्—एस, जी र टी—अपूर्ण छन्। यी मध्ये, "S" वा "Salamanca" सबैभन्दा पूर्ण हो, जबकि अन्यमा केवल कामका टुक्राहरू छन्। त्यस्तै गरी, यसको सिर्जना दुई मितिहरू प्रस्तुत गर्दछ: 1330 र 1343; यो द्वैध मौलिक कागजातहरू फेला परेको कारण हो। "S" संस्करण (1343) "G" को एक संशोधन हो, जसमा नयाँ रचनाहरू थपिएका थिए।
1 राम्रो प्रेम को पुस्तक को विश्लेषण
1.1 कार्यको प्रस्तावना
1.2 डन अमोर बनाम आर्सिप्रेस्टे
1.3 डोना एन्ड्रिनासँग डोन मेलोनको प्रेमसम्बन्ध
1.4 सिएरा डे सेगोभियामा साहसिक कार्यहरू
1.5 Don Carnal र Doña Cuaresma बीच प्रतिस्पर्धा
1.6 Archpriest को अन्तिम प्रेम कथाहरू
2 लेखकको बारेमा: जुआन रुइज, हिटाको आर्कप्रिस्ट
2.1 आफ्नो गृहनगर को लागी विवाद
विश्लेषण राम्रो प्रेमको पुस्तक
पाठ को यो खण्ड गद्य मा लेखिएको थियो - काम को बाँकी विपरीत। यहाँ, लेखकले पुस्तकको उद्देश्य र यसको सम्भावित व्याख्या बताए। जेलबाटै तयार पारिएको पनि उनले बताए । यसमा, धेरै विश्लेषकहरूले विचार गर्छन् कि यो एक रूपक थियो, किनकि यसले साँचो जेलको कुरा गर्दैन, तर पार्थिव जीवनलाई बुझाउँछ।
डन अमोर बनाम आर्सिप्रेस्टे
लेखकले डन अमोरसँग गुनासो गरेर पाठ सुरु गर्छ। पहिलो उदाहरणमा, उनले उसलाई पूंजीगत पापको दोषी भएको आरोप लगाए। अरु के छ त, उनले दाबी गरे कि प्रेम विनाशकारी थियो, किनकि यसले पुरुषहरूलाई पागल बनाउँछ, त्यसैले उसले यसको डोमेनबाट अलग हुन सिफारिस गर्यो।। आफ्नो दृष्टिकोणको व्याख्या गर्न, आर्चप्रिस्टले धेरै कथाहरू प्रयोग गरे, जसमध्ये उनले "गधा र घोडा" लाई मानिसमा गर्वको उदाहरणको रूपमा वर्णन गरे।
अर्कोतर्फ, डन अमोरले उनलाई केही शिक्षा दिएर प्रतिक्रिया दिए। यसको लागि ओभिड र प्रयोग गरियो को अनुकूलन काम गर्नुहोस् मध्य युग देखि: अरस अमांडी. आफ्नो जवाफमा, उनले शारीरिक रूपमा पूर्ण महिला कस्तो हुनुपर्छ र दिन र रात दुवै गुणहरू हुनुपर्दछ भनेर वर्णन गरे। यसका अतिरिक्त, उनले उनलाई सल्लाह दिनको लागि "म्याचमेकर" - प्रेम औषधि बनाउने विशेषज्ञ - खोज्न मनाए।
राम्रो प्रेम पुस्तक ...
डोना एन्ड्रिनासँग डोन मेलोनको प्रेमसम्बन्ध
यो पुस्तकको केन्द्रीय कथा हो। यसमा, रुइजले मध्ययुगीन कमेडीलाई आफ्नो काममा अनुकूलित गरे: पाम्फिलस (XII शताब्दी)। कथा पहिलो व्यक्तिमा छ र माथि उल्लिखित पात्रहरूको रूपमा मुख्य पात्रहरू छन्: डन मेलोन र डोना एन्ड्रिना। षड्यन्त्रमा, पुरुषले प्रश्नमा परेको महिलालाई जित्नको लागि पुरानो सल्लाहकार - ट्रोटाकन्भेन्टोस - खोजे।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि, यद्यपि शारीरिक प्रेमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, धेरै अवसरहरूमा परमेश्वरको प्रेमको नजिक हुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर संकेत गरिएको छ.
Trotaconventos कार्यमा गए, डोना एन्ड्रिनालाई खोजे र उनको पुरानो घरमा डन मेलनलाई भेट्न राजी गरे। एक पटक भेटेपछि, यो अनुमान गरिएको छ - पाण्डुलिपि पृष्ठहरूको अभावको कारण - तिनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो.
यो यस्तो थियो - छल र पासो को लागत मा - अन्ततः विवाह सहमति भयो दुबै बिच । सल्लाहकारको रणनीति सरल, तर प्रभावकारी थियो: महिलाको इज्जत हटाउने एक मात्र तरिका विवाह मार्फत थियो।
सिएरा डे सेगोभियामा साहसिक कार्यहरू
यो Archpriest को अर्को उत्कृष्ट कथा हो। यहाँ उसले सिएरा डे सेगोभिया हुँदै गरेको आफ्नो बाटो सम्झन्छ, जहाँ उनले धेरै साना सहरवासीहरूलाई भेटे।। तिनीहरूमध्ये पहिलो "ला चाटा" थियो, कुनै लाज बिना एक अश्लील महिला। खुल्लमखुल्ला, उनी यौन प्रकृतिको अनुग्रहको बदलामा उपहार माग्थे। कुशलतापूर्वक, मानिस यसबाट र सोमोसिएराका अन्य युवतीहरूबाट भाग्न सफल भयो।
भाग्ने बाटोमा उसले अर्को पहाड भेट्टायो पहाडको फेदमा। यो महिला अरु भन्दा धेरै "बर्बर" थियो। आर्चप्रिस्टले शरणको लागि अनुरोध गरेर, बदलामा, उनले उसलाई केहि प्रकारको भुक्तानीको लागि सोधिन् - यौन वा सामग्री। यो समय, एल होम्ब्रे, प्रभावकारी महिला द्वारा लज्जित, दिए र म सहमत छु निवेदन।
Don Carnal र Doña Cuaresma बीच प्रतिस्पर्धा
भर्जिनमा केही गीतहरू पछि - पवित्र हप्ताको निकटताको कारण - डन कार्नल र डोना कुरेस्मा बीचको युद्धको बारेमा रूपक कथा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ, लेखकले सांसारिक इच्छा र आध्यात्मिकता बीचको साझा टकराव प्रतिबिम्बित गर्दछ। पाठलाई प्यारोडीको रूपमा वर्णन गरिएको छ र कामको मध्यकालीन गीतहरूबाट प्रेरित छ।
डन कार्नल बलियो जम्मा भयो र अपराजेय सेना. यद्यपि, उनको समूहको स्वाद खाना र रक्सी बनाएको खराब अवस्थामा युद्धको मैदानमा गए। यसले टकरावलाई थप सन्तुलित हुन अनुमति दियो, र श्रीमती लेन्ट अधिकतम फाइदा उठाए र विजय हासिल गरे। एक पटक पराजित भएपछि, डन कार्नललाई बन्दी बनाइयो र उहाँमाथि कठोर तपस्या लगाइयो।
Archpriest को अन्तिम प्रेम कथाहरू
प्रेमको खोजीमा आर्चपुत्रले आराम गरेनन्, उहाँले प्रयास र अन्य धेरै साहसिक मा यसलाई प्राप्त गर्न कोसिस गरे। ती सबैमा उनले Trotaconventos लाई फेरि मद्दतको लागि सोधे। पुरानो म्याचमेकरको सिफारिसहरू मध्ये एक विधवासँग प्रेममा पर्नु थियो, तथापि, सम्मानित महिला पूर्णतया विश्वस्त भएन र मानिस असफल भयो। त्यस पछि, नायकले मालिकसँग प्रयास गरे, तर सफल भएनन्।
त्यसो भए ट्रोटाकन्भेन्टोसले गारोजा नामक ननलाई प्रयास गर्न सुझाव दिए। आर्चप्रिस्टले उनलाई प्रेममा पार्ने प्रयास गरे, तर महिला आफ्नो ईश्वरीय भाकलमा अडिग र चाँडै उनको मृत्यु भयो। मानिसले आफ्नो साहसिक कार्य जारी राख्यो, र धेरै ठोकर खाए पछि, उसले ब्ल्याकबेरीसँग सानो सम्बन्ध राख्न सक्षम भयो।
त्यो छोटो विजयको केही समय पछि, म्याचमेकरको मृत्यु भयो। त्यो हानि, निस्सन्देह, नायकलाई धेरै असर गर्यो। कुमारीका लागि अन्य गीतहरू र भगवानलाई भोजहरू पछि, आर्चप्रिस्टले किताब दिएर समाप्त गरे फेरि निर्देशन यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने।
लेखकको बारेमा: जुआन रुइज, हिटाको आर्कप्रिस्ट
जुआन रुइज गुआडालाजारा प्रान्तको एक स्पेनी नगरपालिका हिताका चर्चवादी र मुख्य पुजारी थिए। यसको उत्पत्ति र जीवनको डेटा दुर्लभ छ, के थोरै थाहा छ यो एकल कामबाट निकालिएको छ: राम्रो प्रेमको पुस्तक. यो अनुमान गरिएको छ कि उहाँ 1283 मा Alcalá de Henares मा जन्मनुभएको थियो र टोलेडो, Hita - उहाँको जन्मस्थान - वा नजिकैको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभएको थियो।
साथै यो अनुमान गरिएको छ कि उनीसँग महत्त्वपूर्ण संगीत ज्ञान थियो, जुन यस विषयमा उनको सटीक शब्दकोशमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। कोही मान्छन् - द्वारा Salamanca पाण्डुलिपि- कि उनलाई आर्कबिशप गिल डे अल्बोर्नोजको आदेशमा गिरफ्तार गरिएको थियो, यद्यपि धेरै आलोचकहरू त्यो सिद्धान्तबाट भिन्न छन्। विभिन्न कागजातहरू अनुसार, यो अनुमान गरिएको छ कि उनको मृत्यु वर्ष 1351 मा रेकर्ड गरिएको थियो; त्यतिन्जेल उनले हिताको आर्कप्रिस्टको रूपमा सेवा गरेनन्।
आफ्नो गृहनगर को लागी विवाद
मध्ययुगीनवादीहरू Emilio Sáez र José Trenchs ले पुष्टि गरे 1972 को कांग्रेस को कि जुआन रुइजको गृहनगर अल्काला ला रियल - बेन्जायडे थियो (1510c) -। उनले आफ्नो बाल्यकालको करिब १० वर्ष त्यही ठाउँमा बिताएको पनि उनीहरूले दाबी गरे। यो सबै जानकारी विशेषज्ञहरु द्वारा लामो अनुसन्धान पछि संकलित गरिएको थियो; तर, दुवैको अप्रत्याशित मृत्युका कारण यो अध्ययन निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
अर्कोतर्फ, स्पेनी इतिहासकार रामोन गोन्जाल्भेज रुइजले व्यक्त गरे 2002 मा पूर्ण सत्रमा निम्न: "उनको पुस्तक भर जुआन रुइजले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनीबाट डाटा रोप्दै आएका छन्। उहाँ अल्कालामा जन्मेको हुनुपर्छ, ट्रोटाकन्भेन्टोसले ब्ल्याकबेरीलाई अभिवादन गरेको प्रसिद्ध पदको रूपमा आर्चप्रिस्टको तर्फबाट: "फिक्स, जो अल्कालाबाट आएका छन् तपाईलाई धेरै धेरै अभिवादन गर्दछ" (स्ट्यान्जा 1510a) "।
आजको रूपमा, कुनै पनि दुई सिद्धान्तहरू स्पष्ट स्रोतद्वारा पुष्टि गरिएको छैन, र दुवै शहरहरू अझै पनि मान्यताको लागि लडिरहेका छन्।। यद्यपि, धेरैजसो गोन्जाल्भेज रुइज परिकल्पनामा झुकाव राख्छन्, किनकि अल्काला डे हेनारेस (मैड्रिड) Hita (Guadalajara) नजिकको क्षेत्र हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साहित्यको इतिहास » राम्रो प्रेमको पुस्तक
रोबर्टो ल्यापिड। Pasión imperfecta को लेखक संग साक्षात्कार
डिसेम्बर। वर्षको अन्त्यको लागि नवीनताहरूको चयन